सानेपा प्रकरणमा कसैले नसोचेको बास्तबिकता बाहिरियो, सबिता माताले गरिन यस्तो भबिस्यबाणी(भिडियो हेर्नुहोस) – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/सानेपा प्रकरणमा कसैले नसोचेको बास्तबिकता बाहिरियो, सबिता माताले गरिन यस्तो भबिस्यबाणी(भिडियो हेर्नुहोस)
10,467 1 minute read
आफुलाई भविष्यवाणी गर्न सक्ने दावी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा सकृय सविता माताले पूर्वसचिव पत्नी मुना कार्कीको ह त्या घटनामा आफ्नो अलौकिक शक्तिले देखेको भन्दै केही कुरा सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले धार्मीक र परम्परागत रुपमा पनि मान्न नसकिने केही विवादास्पद कुरा सार्वजनिक पनि भएको र आफुले पनि अलौकिक शक्तिवाट केही कुरा पत्ता लगाएको बताएकी छन् ।
उनले श्रीमती महिनावारी भएको बेलामा धार्मीक संस्कारमा रुद्री पुजा लगाउन नमिल्ने भन्दै पूर्वसचिव पशुपतिनाथ मन्दीरमा पुजा लगाउन गएको भन्ने कुरा नै शंस्कास्पद भएको बताइन् । उनले घरेलु कामका लागि बसेका सञ्जय चौधरीले ह त्या गरेको नदेखिएको दावी गरेकी छन् । छोरा सरह मानेर पालेको छोराले त्यस्तो काम गर्न नसक्ने उनको दावी छ ।
सविता माताले पूर्वसचिव र श्रीमती मुनाका बीचमा केही पारिवारिक समस्या भएको हुनसक्ने र घटनाको कारण त्यही हुनुपर्ने उनको दावी छ । उनले सिसिटिभी फुटेजमा पनि मुना कार्की तर्फकोमात्र दृष्य देखिनु र चौधरी झु”’ण्डि”’एको तर्फ कुनै दृष्य रेकर्ड नै नुहुनु पनि रहस्यमय भएको तर्क गरेकी छन् ।
उनले मुना कार्की र अजयको तस्बिर हेरेका कारण उनले दुई जनाको बीचमा त्यस्तो अनैतिक काम हुन नसक्ने दावी गरेकी छन् । उनको प्राण निकै कष्टका साथ गएको सविताको दावि छ । बच्चा पुरयाउन गएको भनिएको अर्को सहयोगी त्यती नजिकैवाट किन फर्केनन् ? उनले प्रतिप्रश्न गरिन् । गाडीको चालक हुँदाहुँदै चालकलाई फर्काएर आफै गाडी चलाएर किन गए भन्ने पनि एउटा प्रश्न छ । घरभित्र मान्छे छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पूर्वसचिवले गेटको साँचो बोकेर किन मन्दिर गए ? सविताको अर्को प्रश्न छ ।